Ilmihii la ildarnaa rajo xumada oo cadeyn loo helay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilmihii la ildarnaa rajo xumada oo cadeyn loo helay
La daabacay måndag 30 april 2012 kl 16.29
Carur qaxootiya oo qabay cudur loo baxshay apathetic oo afsoomaliga noqonaya "rajo xumo" ayaa cilmi baariyaal daraasad ku sameeyey cudurkaas sheegeen in ilmahaas qabeen cudurkaas oo aysan iska yeelyeelaynin.
2005 ayey ahayd markii ay soo shaac baxday caruur badan oo qaxootiya oo sariirta iska yaal cuntadana lagu siiyo tuubo sanka laga geliyey.
Cudurka caruurtan qabeen oo aan horay loo arag caruur qabta ayaa sababay in dad badan ku doodaan in caruurtan ay waaridkood ku qasbaan in ay iska dhigaan kuwo jiran si ay sharci u helaan.
Lakiin darasad lagu sameeyey 11 ka mid ah carurtaas ayaa muujinaya in uu isbadel ku dhacay qaybo ka mid ah dhiigooda taas oo ay sababta keentay tahay kadeed waqti soo jiitameyey oo ay ilmahaan la kulmayeen. Sidaas waxaa sheegay mid ka mid ah cilmi baarayaasha darsay Caruurtaan, Jonas Bergquist oo barofesar ka ah jaamacada Uppsala University.
- walxa aan daradsa ku sameynay waxan ku aragnay hoos u dhacyo la mid ah mid kay muujiyaan dadka ka soo noqda dagaalada oo ah liidashu dhanka qaluubta ah. Caruurtaan maadooyin ka mid ah dhiigooda aad ayuu u hooseeyey, halka qaar ka mid ah madooyinka dhiigooda uu aad iyo aad u koreeyey. Saasderteed taas waxay taas muujinaysaa in aysan jirin cid musuq' maasuqi kartey baaritaanka lagu sameeye dhiigooda.